Iyo Shanduko Simba reKutamba Yakabatsira iyi FADS Mudzidzi Nhanho kupinda Mukutarisa! | Fred Astaire
Iyo Shanduko Simba reKutamba Yakabatsira iyi FADS Mudzidzi Nhanho kupinda Mukutarisa!
Sangana naTerry, mudzidzi weFred Astaire Dance Studios tinonzwa rombo rakanaka kuva naro! Mwedzi mishanu yapfuura, Terry akauya kuPrice Practice Party kuFADS Buffalo, NY studio nemurume wake, Tim. Asi havana kutamba danho - o, kwete! Pane kudaro, vakatarisa pati kubva kunzvimbo "yekuchengetedza" yekuchengetedza, vachikurukura nevadzidzi vedu nevadzidzisi. Pakati pekutamba, shamwari idzi nyowani dzakaedza kunyengerera Terry pasi. Pakupedzisira, mushure mekuona munhu wese achinakidzwa zvakadaro, Terry akawana tsinga yake. Akauya kuzowana zvidzidzo zvekutanga, achifunga kuti "Ndichangozviedza-saka ndinoziva kuti kutamba kwibhora kunonzwa sei." Zvakanaka, zvakanzwika zvakanaka zvekuti, mushure memaawa mashoma ekutamba, akagutsikana kuti aifanira kudzidza zvakawanda!
Mazuva ano, Terry paanouya nepamusuwo wedu, anovhenekesa studio yese. Iye anotora zvidzidzo pamwe nevarairidzi vake, Dmitry Kuzmenko naViktor Tkachenko, kazhinji sezvaanogona, achiratidza rinenge awa kutanga uye kuti ave nenguva yekutaura nemunhu wese. Terry inzvimbo yakajeka muhupenyu hwedu nekuti anofara zvechokwadi! Iye anogara achiudza vanhu kuti anoda zvakadii studio nemunhu wese arimo, uye ari kutogonesa hubby yake (uyo, parizvino, anotamba rumba rinoremekedzeka)! Isu tese tinoziva kugona kwekutamba kuita zvinhu zvinoshamisa muhupenyu hwevanhu, sesimba riri nani uye simba, chimiro chine toni uye chinobata, kunzwa uine chivimbo uye seksikä, kunzwa unokwanisa uye wakasimba. Nekudaro, sekuziva kweVADZIDZI Varairidzi, munhu wega wega anofanira kuzviwanira iwo wega zvakadzama mabhenefiti ake.
Isu takadzidza mabhenefiti ayo akakura kuna Terry paakakumbira iyo Buffalo NY studio kuti iratidze ballroom kune waanoshandira wepagore Wellness Fair (kwaakamboitawo naDmitry). Mushure mezvo, akagovana nesu kuti anga agara zvakadii, achinyara zvinorwadza. Kusvikira auya kuna Fred Astaire Dance Studios, iye aisambove mumwe wekubuda kunze kwenzvimbo yake yekunyaradza kana kunzwa zvakanaka nezvekuva munzvimbo inoonekera. Asi, apa aive, bhora rekutamba pamberi pevashandi vake zuva iri, mufananidzo wekuzviremekedza. Aive akanaka, aine chivimbo, uye achinyemwerera. Kunyangwe aigara achinzwa nenzira iyoyo mukati, Terry achakuudza kuti zvidzidzo zvekutamba zvebhora zvakamubatsira kuti ave "iye" zvakanyanya kunze kupfuura nakare kose muhupenyu hwake. Senge danho rake saucy risati ratobvumikisa, Terry "mukadzi mutsva" uyo anototamba maviri emhando nyowani mabhora matsva ekutamba matomu! Terry, tinoda kuti iwe wakanyanya "iwe pachako." Uye isu tinokuda, futi! Koiwe? Taura nesu kuFred Astaire Dance Studios uye uwane yako nyowani "IWE"!
Iyi nyaya yakadhindwa kubva muChirimo 2015 chinyorwa che muSTEP Magazini, Fred Astaire Dance Studios 'kota yemudzidzi yekota. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve FADS ' muSTEP Magazini, shanyira yedu Facebook peji.